Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2007 | 2
VIP sy VETO ary 4X4
2007-10-25 @ 07:20 in Politika
Fony tany am-pianarana moa dia nianatra ny tantara ihany koa ny tena. Fony vao nandresy ny Alemana tokoa, hono ny vondrona mpiara-dia no nizara ity firenena nanjakazaka saingy resiny ity ho efatra. Tsy izany ihany fa rehefa najoro ny Firenena Mikambana dia ireo Firenena Efatra ireo, ary nampian’I Shina taty aoriandriana, no nanana izany hoe vato tsy azo ivalozana na VETO izany. Iza Moa ireo Firenena efatra ireo? Etazonia, Angletera, Frantsa ary Rosia.
Manaraka izany dia misy ihany koa ireo manana ny laharam-pahamehana rehefa sendra fifanenana eny amin’ny sampanana. Misy koa ireny olona malaza ireny izay fanaja fatratra ka nomena ny fanafohazana anarana hoe VIP avy amin’ny teny hoe Very Important Person. Tsy izany manko fa manana ny antsoina hoe VETO sy VIP ihany koa I jentilisa. Azonao ve izay tiako lazaina?
Manaraka izany dia ny resaka 4X4 nomena ny depiote any Mandoto indray no malaza amin’ny ady hevitra amin’izao fotoana izao. Efa nankalazaina fatratra tamin’ny andron’ny fifidianana farany teo fa tsy mahazo 4X4 intsony ireo depiote ireo, kanjo asa na entanim-po ny filoham-pirenena na izay tokoa no ao an-tsainy fa dia omena indray izay depiote miasa ka efa mahazo avy hatrany ilay any Mandoto ity. Asa loatra, ahoana angaha no nahafantaran’ny filoha Ravalomanana fa miasa ity depiote vao nandray ny asany afak’omaly ity ka itsarany azy avy hatrany ho miasa.
Ny manahirana dia izao, ilay zo tonga dia nomena ny depiote teo aloha dia lasa araka izay itiavan’ny filoham-pirenena azy sisa. Raha misy tiany omena dia omena fa raha misy tsy tiany omena dia tsy omeny. Tsy mety izany fa fiandohan’ny fiangarana avy hatrany. Efa nisy ihany ny tsilia-tsofina fa nisy fiangarana mandrakariva tao amin’ny Antenimieram-pirenena tao amin’ny resaka tombotsoa tamin’ireo vao nahavita ny asany. Ilay kabarin’ny filoham-pirenena tany Mandoto iny indray no toy ny manaporofo aza fa avy aminy mihitsy ny loharanom-piangarana.
Nolazaina fa midadasika loatra ny faritra ka tsy ary ho voatety avokoa saingy izao, nandritra ny fampieleza-kevitra ianao nahavita ihany koa injay nony tena miasa ve dia mila izany 4X4 izany indray? Lasa ho amin’ny fireharehana sy fanjakazakana indray izany ny toeram-boninahitry ny depiote raha izany koa inona indray. Tsy nitana ny teny nomeny ny filoham-pirenena niteny fa tsy hisy intsony ny 4X4 ho an’ny depiote, ary dia ny fahalalana izay toe-javatra izay no nirotsahan’ireo lany rehetra ireo. Raha nisy izany ny fotoana tsara indrindra nanafoanana ity fandaniam-bola amin’ny tsy antony amin’ny resaka 4X4 ity dia tamin’ity indray mitoraka ity saingy tsy nahay nitazona izany ny filoham-pirenena. Indrisy…